တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ဗိုလ်လုပ်လိုသလား (၅)
Thank you very much , Ma May.:D
9/05/2007 4:59 AM
အမ ရေ လာလည်သွားပါတယ်။ အမ post လုပ်ထားသည်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အမည်မဲ့များရ့ဲ အောက် တန်းကျ သော comment များကိုအထူးပဲရှုပ်ချပါတယ်။
9/05/2007 7:32 AM
မမေ စာတွေဖတ်ရတာ အကြားအမြင်များကြီး တိုးပါတယ်။ တစ်ခုတော့မေးပါရစေ။ ကလောင် နာမည် နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့။ ဆရာကြီး တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင်ရဲ့ ပညာ၏သဘောထဲမှာ မေဒါဝီ ကို ပညာရှိလို့ အနက်ပြန်ထားပါတယ်။ ခုမမေရဲ့ နာမည်က မေဓာဝီ သမင်မကို ညွှန်းလိုတာလား။ ရည်ရွယ်ချက် နာမည်မှာ ရှိနေပါသလား။ အဲဒါလေး သိလိုပါတယ်။
မေဒါဝီရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဟာ ပညာရှိပါ…
၀ရမ်းပြေးနဲ့ ဖာသည်မနဲ့… လမ်းဟောင်းက တံတားပျက်အောက်မှာ…
ခွေးဝဲစား… ကလေကချေ အမျိုးအစားတွေလောက်တော့…
9/05/2007 11:11 AM
how to comment in myanmar font?what font was used in there comments.
9/05/2007 2:03 PM
how to comment in myanmar font?what font was used in there comments?
အပြန်အလှန် ရိုင်းစိုင်းနေလိုက်ကြတာနော်... ငါးစိမ်းသည်တွေလိုဘဲ ... ဘလောက်မှတ်လို့ဝင်ဖတ်မိပါတယ်.. အင်တာနက်ပေါ်ကငါးစိမ်းသည်တန်း
ကြီးဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်နေတာကိုး ... အကျိုးမရှိလိုက်တာ ဘာလို့သတ်နေကြတာလဲ.. တယောက်နဲ့ တယောက်မြင်၇တာလဲမဟုတ် ....
9/05/2007 3:15 PM
စာကိုပဲဖတ်ပါ… comments … တွေဝင်မဖတ်ပါနဲ့…
သည်းခံမှန်းသိရင်… အကဲပိုလာလို့… ပြန်ဆော်ပေးတာ…
သူတောင်းစားကို… ဘောဂဗေဒ ဝေါဟာရတွေသွားပြောနေရင်…
နားမလည်နိုင်သလို… သူ့တို့အဆင့်နဲ့တန်တဲ့ စကားလုံးတွေ…
ရွေးချယ်သုံးနှုန်းပေးလိုက်တာ… အဲ့ဒါမှ.. ရှင်းကနဲ.. လင်းကနဲ
9/05/2007 4:10 PM
မီဒီယာကို… မီဒီယာနဲ့ တိုက်ပါတယ်…
9/05/2007 4:14 PM
character of philtre=character of kyaw san
ငါ့ကို မင်းတို့ပထွေး.. စရိုက်နဲ့လာမနှိုင်းနဲ့….
ငါအလှူမခံနိုင်ဘူး… ဒဒွေး… သနတယ်…
9/05/2007 7:42 PM
philre!ရှင့်ကိုနဲနဲတောင်မှ သံသယ၀င်ချင်လာပြီနော်.. စိတ်မှမှန်ရဲ့ လား???? ရှိသမျှလူ ကိုဒိုင်ခံ၇န်ဖြစ်နေတော့တာဘဲ ...ရှင့်ကိုပြောသွားတဲ့လူကသူ.ပထွေးကိုကျော်ဆန်းလို့ တော့ခေါ်မယ်မထင်ပေါင် ရှင်တို့ မိထွေးကိုအောင်ဆန်းစုကြည်လို့ ရှင်တို့ မခေါ်သလိုပေါ့ .. အကောင်းမြင်တတ်ပါစေ... မဲမဲမြင်တိုင်း ၇န်သူထင်နေ၇င်တော့ ရှင့်မှာ insecurity complex ၀င်နေပြီထင်တယ် ၊ ဦးသုတ ဆီသွားသင့်တယ်၊
9/06/2007 8:03 AM
Are you from Army?or the association with the name of "swan arr shin". coz you are fighting with anyone.I think it reflects to your parent.Think about it.
9/06/2007 9:41 AM
ဒီတခါတော့ ငါးစိမ်းသည် ကနေ ခွေးရူးဘွဲ့ ပေးလိုက်ပါကြောင်း....
9/06/2007 12:56 PM
9/06/2007 4:58 PM
9/06/2007 5:06 PM
နောက်ဆုံးတော့philtre ဆိုတာက မမေ... မမေဆိုတာ philtre ....တသွေးတည်း တသားတည်းကိုး.....ကာ၇န်နဘေထပ်ပြီးစာတွေချိုးနေ
နင်တို့ သာ အဖေမျက်နှာကိုမှမထောက် ကိုယ်တိုင်းပြည်ကို ကျွန်လုပ်ခဲ့တဲ့လူမျိုးကို လင်တော်ထားတဲ့မိန်းမကြီးကို အမေ အမေ နဲ့ ခေါ်ပြီး
ထိုင်ကန်တော့နေကြဟေ. ... ကျွန်လုပ်ချင်နေကြတယ်ပေါ့ ...နင်တို့ မိထွေးက တိုင်းပြည်ကိုဘဲ ကယ်မလား ..ချောက်ထဲဘဲချမလား စောင့်ကြည့်အုံးမယ်.....
ပျင်းလို့ဝင်ဖတ်မိတိုင်းသွေးတိုး၇တယ်..တော်ပြီ လုံးဝမဖတ်တော့ဘူး
ဗမာပြည်က မြန်မာစာအဓိကနဲ့ ဘွဲ့ရခဲ့ပါတယ်…
မြန်မာမှုစာပေတွေ ဖြန့်ဝေနေတဲ့ ဘလော့မို့
မင်းတို့လို မိစ္ဆာဆိုးတွေ ချယ်လှယ်သောင်းကျန်းနေကြလို့
ဒီဘလော့ရှင်နဲ့… ကိုယ်ဟာ ကမ္ဘာကြီးခြားနေပါတယ်…
ပုဂံခေတ်သုံးဝေါဟာရကနေ… ဒီကနေ့ ဗန်းစကားတွေအထိ..
ဒါပေမဲ့ သူ့အိုးနဲ့သူ့ဆန် တန်ရုံမျှ ဝေါဟာရတွေ